Atụmatụ maka Usoro Ọdịnaya Ọdịnaya Gị
Yabụ azụmaahịa gị nwere blọọgụ yana ọnụnọ na isi nyiwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma eleghị anya ụlọ ọrụ ole na ole akọwapụtara - oke! Ugbu a gịnị? Kedu ka ị ga-esi mejupụta ọwa ndị a, na nke ka mkpa, na usoro mgbasa ozi 24/7 a, olee otu ị ga-esi nweta ọdịnaya gị iji belata mkpọtụ ahụ wee pụọ?
Ọ bụ usoro dị ogologo. Onye ọ bụla ga-abụrịrị onye ahịa ọdịnaya ụbọchị ndị a. Ma egbula onwe gị. N'ezie. Lelee ihe ngosi anyị n'okpuru maka usoro a na - eme nke iji mepụta ihe - ịkọ nke ahụ - awesomesauce ọdịnaya.
Takefọdụ na-ewepụta banyere ahịa ọdịnaya sitere na JESS3 VP nke Strategy Brad Cohen:
1. Gbado anya na ọnụ ala (gụọ: oge, akụrụngwa, ego, wdg), nnukwu mbọ. Ihe kpatara agụba Occam ji dị nkọ n'afọ ndị a niile bụ n'ihi na ọ baghị uru imekwu ihe nwere ike ime na obere. Echiche ndị dị mfe na-arụ ọrụ, ruo mgbe ị nwere mmefu ego nke na-enye ohere maka ngafe, ọ dị mma icheta nke ahụ.
2. Okwu ochie ahụ “dee ihe ị ma” bụkwa eziokwu. Chọpụta isiokwu ebe akara gị dabara. Ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ebe ị nwere ike itinye na akụkọ ahụ n'ụzọ awesomesauce.
3. Chọpụta akụrụngwa nwere ike ịkpụzi ọdịnaya gị. Dịka ọmụmaatụ, data siri ike na-etinye aka na nlele anya, ebe UGC nwere ike imegharị maka itinyekwu aka. Chọpụta ihe ị nwere ike ịnweta (site na data siri ike gaa na ahụmịhe tozuru etozu), yana etinyela onwe gị na ihe ị chere na ọ bụ mmasị. Malite site na ilele ihe niile na mkpịsị aka gị, wee nwaa ịtụgharị uche maka otu esi eme ka ihe ahụ masịrị ndị na-ege gị ntị na ọwa ị na-eji.
4. Debe onwe gị dịka ọkachamara n’isiokwu ndị na-ege gị ntị na-eche banyere (nke metụtara ma ọ bụ n’ụzọ na-enweghị isi na akara gị). Mepụta ọdịnaya nke na-emetụta ha na-eme ka ika gị dịkwuo mkpa na ndụ ha. Mana ọ bụ maka ịgbakwunye uru, ọ bụghị naanị ijikọta mkparịta ụka nke ndị ọzọ.
5. Ikpebi otu esi akọọ akụkọ ahụ dị mkpa ka ihe akụkọ a bụ.
6. Na-arụ ọrụ ịkọ otu akụkọ n’ụzọ dị iche iche. Enwere ike ịme echiche ọ bụla n'ime usoro ọdịnaya. Nyochaa otu akụkọ site na iji akụkụ dị iche iche na-enye ndị na-ege gị ntị ahụmịhe bara ụba - ka ị na-enyekwu ọdịnaya. Zere ịbụ Dr. Seuss ('olee otu ị ga - esi jiri ngwaahịa anyị na mmiri ozuzo, ụgbọ oloko, ụgbọ mmiri, na ewu?'). Anyi achoghi imeghari n’enweghi uru, ma ikwughari akuko n’uzo ndi n’etinye uru ma o bu dicha ndi mmadu ndi ozo bara uru.
Tags: ịde blọgụcontent MarketingFacebookjess3ahịa mmadụelekọta mmadụ mediaSocial Media MarketingTwitter
Hemanth Malli kwuru
Mara ezigbo mma nghọta na ahịa ọdịnaya .. ekele maka òkè !!